Ọtụtụ mmadụ na-enweta koodu nkwado maka LucidPix, na ọ dị mkpa ka ị mata etu esi ekwu ya. N'okpuru ebe a, enwere usoro maka otu esi agbapụta koodu nkwado LucidPix gị maka ha abụọ android na iOS na usoro.
Mgbapụta koodu nkwado gị maka iPhone
Detuo koodu emeghe anyi zitere gi na email gi.
Meghee App Store ngwa.
Na ala ihuenyo ahụ, pịa Taa.
N'elu ihuenyo ahụ, pịa nke bọtịnụ nbanye ma ọ bụ foto gị.
Mgbata “Mgbapụta Onyinye Kaadị ma ọ bụ Koodu. ” Ọ bụrụ na ịhụghị “Mgbapụta Onyinye Kaadị ma ọ bụ Koodu,” jiri ID Apple gị banye. Mụta ihe ị ga-eme ọ bụrụ na echefuru ID Apple gị.
Mgbata “I nwekwara ike tinye koodu gị aka”Ma soro ntuziaka ihuenyo ahụ wee tinye koodu anyị zitere gị site na email.
Kpatụ ime eme.
Ọ bụrụ na ndenye aha gị egosighi n'ime LucidPix, biko pịa akara ngosi onye ọrụ na ala ala ihuenyo ahụ, mgbe ahụ ntọala ntọala / gia dị na nri aka nri. N'ikpeazụ, kpatụ Weghachi n'okpuru Purzụta In-App
Mgbapụta koodu nkwado gị maka gam akporo
Na ngwaọrụ gam akporo gị, mepee Google Play Store ngwa .
Pịa NchNhr Naputa.
Tinye koodu site na email gị.
Ugbu a ị dịla njikere ịpụ apụ n’ebe ahụ ihe niile LucidPix nwere inye. Gbaa mbọ hụ lelee blọọgụ anyị maka etu esi-eduzi ya na-eche free kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ọ bụla.
Etu esi etinye ma wepu 3D Frame →← Etu esi Ese 3D foto na Ederede